Great Silver Pack (Shenzhen) Co., Ltd. foibe any Hongkong, natsangana tamin'ny taona 1993, eo akaikin'ny fialantsasatra tsara tarehy Shiyan Lake Vacation izy io. Resort any GuangMing New District, Shenzhen, Sina. Dia 20 minitra mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shenzhen. Izahay dia iray amin'ireo mpanamboatra matihanina lehibe indrindra mamokatra sarimihetsika mihena polyolefin any Sina. Ary ny mpanao voalohany lehibe indrindra tany atsimon'i Sina izay manana traikefa maherin'ny 19 taona amin'ny famokarana fitaovana famonosana.
Fahamarinana, fisokafana ary mifanentana, fampandrosoana mirindra ary mamorona toe-javatra mandresy; Ho tafavoaka velona amin'ny kalitao, hivoatra amin'ny lazany, ary handray soa avy amin'ny fitantanana; Fandraisana anjara feno, fanamafisana ny fitantanana, ezahana ny tonga lafatra, hatsaran-toetra ...
Mankasitraka, miabo, mifantoka, mazoto ary miara-miasa; Firahalahiana, firindrana, fanavaozana, fifandraisana ary fandresena; Mandrosoa mialoha, mandresy, miady, mifampiresaka, mamaky, manatratra
Ny fahatsiarovan-tena momba ny kalitao dia ato am-poko, eo an-tanako ny kalitaon'ny vokatra; Mitandrina, mandinika ary mitandrina, mba hahafahan'ny mpanjifa mahazo antoka amintsika; Mamorona am-po, ampiasao amin'ny fahatokisan-tena ary miaina am-pifaliana
Aza manontany ahy hoe inona ny hafanan'ny POF mihena ...
Misy fahasamihafana ve ny POF sy izy ...
Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Temperature famonosana polyolefin, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Mitete Film Pvc, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Famonosana Polyolefin Pof Shrink,